Nea Enti a Nkurɔfo Di Atoro—Wudi Nokware a, Ɛkyerɛ sɛ W’ani Mmuei Anaa?
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mam Maya Mazatec (Huautla) Mende Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Wudi Nokware a, Ɛkyerɛ sɛ W’ani Mmuei Anaa?
Hitoshi ne adwumakuw bi a ɛwɔ Japan na ɛyɛ adwuma. Ná ɔboa ma wɔtoto adwuma no sikasɛm. Bere bi a na ɔne ne panyin rehwehwɛ adwuma no sikasɛm mu no, ɔpanyin no ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ ɔrehyehyɛ sikasɛm ho nkrataa a, ɔnyɛ kata-so-muamua-so. Nanso, Hitoshi kae sɛ ɔyɛ saa a n’ahonim bebu no fɔ. Ohunahunaa no sɛ obeyi no adi, na ampa-ne-ampa ara oyii no adi.
Bere a woyii Hitoshi adi no, ɔyɛɛ sɛ ɔbɛpɛ adwuma foforo, nanso ɔtare a, na awae; eyi maa n’abam bui. Bere bi sɛɛ, adwumakuw bi frɛɛ no, na wɔmaa obi bisabisaa no nsɛm. Nkɔmmɔ no rekɔ so no, Hitoshi ka kyerɛɛ no sɛ n’ani nnye kɛtɛasehyɛ ho. Eyi maa nea ɔrebisabisa no nsɛm no kaa sɛ, “Wo ho yɛ me nwonwa paa!” Asɛm yi maa Hitoshi werɛ howee, nanso abusuafo ne nnamfo hyɛɛ no nkuran sɛ mma ɔmmpa abaw; ɔnkɔ so nni nokware. Nanso na ne tirim nteɛ no, enti da bi mpo de, ɔkaa sɛ, “Ei, enti obi di nokware a na eye anaasɛ odi atoro a na eye?”
Nea Hitoshi faa mu yi ma yehu sɛ ɛnyɛ obiara na nokwaredi ho hia no saa. Ɛba aguadi ne nnwuma mu koraa de a, na asɛm no asɛe; sɛ obi ka nokware a, wobu no sɛ wagyimi. Ɔbea bi a ɔwɔ South Africa kae sɛ, “Nokwaredi abɔ wɔn a me ne wɔn yɛ adwuma no, na ɛtɔ da mpo a ɛyɛ me sɛ menyɛ nea wɔreyɛ no bi.”
Nneɛma a obi yɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ ɔnokwafo no mu baako ne atorodi, na abu so wɔ baabiara. Bere bi adwene ne nneyɛe ho nimdefo Robert S. Feldman a ɔwɔ University of Massachusetts Amherst yɛɛ nhwehwɛmu bi faa atorodi ho. Ohuu sɛ, sɛ nnipa 10 biara rebɔ nkɔmmɔ bɛyɛ simma du a, anyɛ hwee koraa no emu nsia bedi atoro. Feldman ka sɛ: “Nea mihui no, na ɛyɛ asefem paa. Yɛanna anso dae sɛ atorodi begye nsam saa.” Yɛreka yi, nnipa pii mpɛ sɛ wɔn yɔnko nnipa bedi atoro akyerɛ wɔn, nanso atorodi abu so. Wohwɛ a, ɛnyɛ nwonwa?
Adɛn nti na atorodi, korɔnbɔ, ne ɛho nkorɔneba abu so saa? Sɛ nkurɔfo anni nokware a, nsunsuanso bɛn na ɛde ba? Afei bisa wo ho sɛ, Dɛn na mɛyɛ na mantɔ saa afiri yi mu?